Umsakazi uhlukanise esashade izinyanga ezimbili
UMSAKAZI weMetro FM, uLerato Kganyago, uhlukanisile nomyeni wakhe obengusoabhizinisi Isithombe:INSTAGRAM
KUPHELILE obekuhlanganise umsakazi weMetro FM, uLerato "LKG" Kganyago nomyeni wakhe ongusamabhizinisi, uMnuz Thami Ndlela emuva kokubopha ifindo likasofasilahlane ngoMashi kulo nyaka. Lezi zindaba zokugqabuka kwegoda zidalulwe nguLerato ku-Instagram namhlanje ngoLwesine.
Kwenzeka lokhu nje, bekungakapheli nesonto uzakwabo kaLerato, uNoluthando "Lootlove" Shosha ememezele ezinkundleni zokuxhumana ukuthi usewulaxaze phansi umshado wakhe nomrepha uSizwe "Reason" Moeketsi.
Esitatimendeni azibhalele sona uLerato uthe bahlukaniswe ukuba namaphupho angefani nokuthi imithwalo ebebeyithwele beyingabavumeli ukuba babe nesikhathi somshado wabo. Isitatimende sakhe sifundeka kanje: "Ngenhliziyo ebuhlungu mina noThami siyanazisa ukuthi sesithathe isinqumo sokwehlukana. Sitholile ukuthi silangazelela izinto ezingefani futhi nemisebenzi yathu egcwele inyinyitheka ayisinikezi ithuba lokuba sisimamise ubudlelwano bethu. Akukho okunye esingakusho ngalolu daba futhi siyethemba impilo yethu yangasese izohlonishwa kulesi sikhathi esinzima esibhekene naso."
Nezindaba zokuthi useshade noNdlela zadalulwa nguye uLerato ohlelweni alwenza noSomizi Mhlongo-Motaung, Naked DJ noDineo Ranaka oluthi The Bridge.
Waphahluka engosini yabo ethi #AskAMan. Ushada nje noNdlela wayesanda kudalula ezinkundleni zokuxhumana ukuthi uhlukene nesoka lakhe leminyaka emine ngenxa yokuthi ubengaphethekile kahle. Ngaphambi kokuthathwa nguNdlela, wake wasolwa kuzakwabo uNaked DJ kodwa bawachitha lawomahlebezi.